IJIBBAATA – Beekan Guluma Erena
IJIBBAATA	Beekan Guluma Erena
Asoosama, Personal Category, Politics Category April 14, 2016April 14, 2016	7 Comments
I J I B B A A T A
Asoosama Diddaa Oromoo
© BEEKAN GULUMMAA IRRANAA 2016
Mirgi barreessichaa seeraan eegamaadha! Kitaaba kana eeyyama barreessichaatiin ala karaa kamiinuu baay’isuufi raabsuun seera Waaqaaf lafaatiin nama gaafachiisa! Haata’u malee, manneen barnootaa garaagaraa keessatti dhimma qorannoo barnootaatiif barreessicha maqaa dhahatanii wabeeffachuun nidanda’ama. Barreessichaafis yaada qeeqaafi ijaarsaa kennuun aantummaadha!
Bakka bu’aa kan hinqabne, dheebuu injifannoof jecha lubbuu qaalii tokkittii qaban sana dabarsanii kan kennan qofaan ittiin haayadaman!
Akkaaf hiikasaa wallaalus takka takka jirmi yaada keessakooti akka Voolkaanoo dhoha; takka takkammoo akka abidda saafaa bubbeen qilleensarra gingilchuutti nahaamaraa’aa; walnyanyaatas!…takka takkas akka daa’ima haati irraa gabaa deemteettin foolii haadha ormaan qilleensa keessaa suufaafi urgeeffataa oola. Ammas dabaleen funyoo hawwiitiin of rarraaseen ofis ajjeesuuf meeqa of gaadi’a. Obsa liqeeffachuufis balbala Waaqaattan sagal deddeebi’aa oola. Manni galmeekoos kan Waaqarraa rarraasa funyoosaatiin addunyaa nanaannessuu malee deebiin atattamaa isaafis dandamate…garaankoos darbii deemii yoo deemsaan hawwiin guutameef naan jedha; barachuun, dubbachuun, qotachuun, daldalachuun, gaafachuufi falmachuun diniinummaa erga ta’ee jennaan, ‘yoo dubbatan bubbee yoo callisan buqqee’ kan jedhu sanatu natti yaadatamaa ture. Taa’umsaafi ka’umsa; aggaama duubeefi fuulduraatu waljala garmaamaa turan-akkafaaruu ayyaana ateeteetti. Maraamartoo akka bu’a ayyaana guyyaa daacheefi arreeddii akka miilla fiichees ta’a jennaan ta’uu dide. Ani anas namas miti; lafas samiis miti; kan qaban qabaa hinguunne, gadhiisan bakkee guuttii yoo jedhan, bakkeenis nagaa diddee jallinaan guutteetti. Galaana bineensi keessa shaggooyyee taphatu fakkaata; dhiichisaafi garmaammiinsaa toora uumaafi uumamaarraa gara mulqama eenyummaatti ceheera. Roorroo, loogii, hiraarsa, diigamsa, jeequmsa, hidhaa, duguugginsa, mulqama…isa kaaniif muudama; buburree akka kafana maraatuu gabaa keessaa ta’e addunyaa ani argaa jirutu. Isan gonfadheerra; kanan dhokfadhetu fiixee gaanii hawwiikoorraan dhangala’e; kanan ta’eefi kan naaf ta’etu waljala qaxxaamureera. Bu’aan du’aaf jireenyaa madaalarra taa’aniitu walcaalmaa hanqatan. Kan jirus kan du’erra hinjiraanne……
-Itti fufaa dubbisaa>>>>>>>
Pages: 1 2 3 4 5 6	← JAAMAA TURTE
7 thoughts on “IJIBBAATA”	Fekede JoteApril 14, 2016 at 7:11 pmPermalink	Ergaa guddaa qaba nuti warri biyya keessaa roorroo of irratti jibbinu illee barana du’a keenyatu hafa jetteeti isin warri dibaabee ffaranjii jala jirtan adaraa jabaadhaa! nuti hantuuta dullaa qabatanii boolla ishee irra dhaabatan taaneerra.
Reply	obsaApril 28, 2016 at 6:56 amPermalink	Yaa Beekan nuuf jiradhu .umurii dheeradhu.
Reply	Gemechis DerejeApril 29, 2016 at 8:35 amPermalink	Beekan galatomi nuuf jiraadhu
Reply	Murtessa Chala MirkenaMay 19, 2016 at 3:15 amPermalink	Hayyuu hayyuudhan bakka bu’ee,qabeenya ummaata oromooo,abba dhaloota qubee sii ibsuuf jechi si ibsuutu hin jiru sabboona Leenca oromoo Beekan keenya nuf jiraadhu umurii dheeraa qalamni kee haa mirgitu kanuma caala,dhaloota darbaniif yaadannoo,kan jiraniif immoo seenaa haa ta’uu…..dhamsi kee…..nuuf jiraadhu….!!!!
Reply	murataa GadaaaJune 11, 2016 at 10:15 pmPermalink	Nama guddaa oromoo kan jarraa kana. umrii dheeradhuuu yaa Beekan keenyaa!!!!!!
Reply	AnonymousJune 26, 2016 at 5:42 pmPermalink	Beekan umrii dheeradhu sanyii mootii
Reply	Magarsa NagasaaApril 9, 2017 at 12:47 pmPermalink	Nama akka maqaa isaa. beekan qaroo oromoo umrii dheera jiradhu Abdii ijollee oromoo “hamman si hin argin bakka jirtutti